>Regime bars lawyer from Daw Su trial
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အမှုတွင် ပါဝင်မည့် ရှေ့နေတဦး လိုင်စင်သိမ်းခံရမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၄မေ ၁၆၊ ၂၀၀၉ အာဏာပိုင်တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ်းလှမ်းထားသည့် ရှေ့နေ့ ၃ ဦးအနက် ၁ ဦးထံသို့ ယမန်နေ့ညပိုင်းတွင် သွားရောက်ပြီး ရှေ့နေလိုင်စင် ဖျက်သိမ်းကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ လိုင်စင် ဖျက်သိမ်းခံရသဖြင့် ဒေါ်စု ရင်ဆိုင်နေရသော အမှုကို ကူညီခွင့် ရတော့မည်မဟုတ် ဟု ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက မိုးမခကို ပြောသည်။ “ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ဋ္ဌေးကြွယ် နဲ့ ကျနော့် ကို ဒီအမှုမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တောင်းဆိုထားတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့် ရှေ့နေလိုင်စင် အသိမ်းခံလိုက်ရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။ ဒေါ်စု၏ အမှုတွင် ရှေ့နေ ၂...
> အမေရိကန်က မြန်မာပြည်အပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု တနှစ်ထပ်တိုးမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၄မေ ၁၆၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုကို သဘောမတူသူ တဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာဇာနည် အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ထားခြင်းကို သက်တမ်း တနှစ် တိုးလိုက်သည်။ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် အတိုက်အခံများနှင့် ဆွေးနွေးပြီး ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ထိုသို့ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်၏ အရေးယူမှုတွင် “အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်းများ အပါ အဝင် အခြားသော နိုင်ငံခြားသား၊ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်ခြင်း၊ စစ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများရဲ့ ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း” စသည့် အချက်များ...
> အလင်းရှင်အိမ်သီ (သာယာဝတီ)မေ ၁၆၊ ၂၀၀၉ အမေပြည်သူ့ အသည်းနှလုံးထဲဖျောက်ဖျက်မေ့မရအမေ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကဒီနေ့ခေတ်သမိုင်းစဉ်အထိအရှိတရားအစစ်နဲ့ ထွန်းလင်းတောက်ပ နေဆမျိုးဆက်ရဲ့ကြယ်တပွင့်အလင်းရှင်အဖြစ် မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ အမေရက်စက်တဲ့စနစ်နဲ့ အခုခေတ်နိုင်ငံရေးမှာခေတ်သစ်ရဲ့ စနစ်သစ်တို့ တိုးတက်နိုင်ငံရေးအတွက်အားလုံးနဲ့ လက်တွဲတိုက်ခိုက်ရင်ဆိုင်ရင်းပေးဆပ်မှု ကြီးမားခြင်းစွန့်လွှတ်မှု ကြီးမားခြင်းထိုထိုသောအရာတွေအတွက်အလေးပြုဂုဏ်ယူပါသည် ။ အမေထာဝရငြိမ်းချမ်းပါစေထာဝရချမ်းမြေ့ပါစေဆုံးရှုံးခဲ့လို့ မရတဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေမမျှတခဲ့လို့အရှုံး နဲ့ အခြေခံဥပဒေတွေအားလုံးရစေဖို့ အားလုံးပြောင်းစေဖို့ စိတ်ဓာတ်နှလုံးရည်နဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ ဒီတိုက်ပွဲအလင်းရှင်အပြီးသတ်နိုင်ပါမည်။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Mar Mar Aye talks about Daw Suu
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ပြောချင်တဲ့စကားများမာမာအေးမေ ၁၆၊ ၂၀၀၉ ဟေ့ … ပွဲကတော့ ကြည့်မကောင်းတော့ပါဘူးကွယ်၊ ဘောလုံးပွဲ ဂိုးစည်းအတွင်းမှာ နောက်တန်း ခံစစ်မှူး (ဘက်) တွေက တဖက်အသင်း ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှူး တဦးကို ခြေထိုးခံလိုက်၊ ဖနောင့် ချိတ်နင်းလိုက်၊ ညို့သကြီး ကန်လိုက်၊ အရှိုက် ထောက်လိုက်၊ မျက်နှာ ဖြတ်ရိုက်လိုက်၊ မှောက်လျက်လဲတော့ ချော်လဲရောထိုင် ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်လိုက် လုပ်နေကြတဲ့အထဲမှာ၊ လူကျွံဘော တယောက်က ဖြတ်၊ ဖြတ်တဲ့သူက ဖောင်း မဖြစ်၊ လဲနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး သူ မထလာလို့ ဟိုကောင် ဖောင်း ဖြစ်တာ ဆိုတဲ့ပြီး၊ ဒိုင်လူကြီးက ပယ်နယ်တီ မပေးတဲ့ အပြင် အနီရောင် ကတ်တပြပြ ပ...
>poem for May 18, 2009
> ၂၀၀၉ မေလ(၁၈)ရက်နေ့နံနက်အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ရှေ့ တွင်မြန်မာ ပြည်သူများ စုဝေး ရွတ်ဆိုရန် အထူးကဗျာအောင်ဝေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ချက်ချင်းလွှတ်)၂မတရားတဲ့ ဥပဒေ (အလိုမရှိ)၂မတရားတဲ့ အစိုးရ (ကျဆုံးပါစေ)၂ အင်းစိန်ထောင်ကြီး ဘယ့် နှယ်ဝိုင်းမယ် (ဒိနှယ်ဝိုင်းမယ်)၂အင်းစိန်ထောင်ကြီး ကျယ်တယ်ဆို (ထပ်ချဲ့ လိုက်)၂အင်းစိန်ထောင်ကြီး ဘယ်သူ့ အတွက် (သန်းရွှေအတွက်)၂ သန်းရွှေ သန်းရွှေ (အို့အို့ )၂သန်းရွှေ သန်းရွှေ (နုတ်ထွက်ပေး)၂နအဖဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေ (ဖျက်သိမ်းပစ်)၂ နအဖရွေးကောက်ပွဲ (ဘွိုင်းကောက်)၂အရေးတော်ပုံ (အောင်ရမည်)၂အရေးတော်ပုံ (အောင်ရမည်)၂ အောင်ဝေးမေ ၁၅-၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Maung Swan Yi on DASSK
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ မိသားစုများကို ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရန် – စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ မောင်စွမ်းရည်က ပန်ကြား မိုးမခ မေ ၁၆၊ ၂၀၀၉ ယခု စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အနီးကပ် စောင့်ရှောက်နေကြသူ မိတ်ဆွေများနှင့် ဆရာဝန်တို့ကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် အကျဉ်းချထားပြီး တရားစွဲဆိုရန် ဆောင်ရွက်နေခြင်း အပေါ် အမေရိကန်ပြည်ရောက် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ မောင်စွမ်းရည်က သဘောထား အမြင်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ၎င်းပြောကြားချက် အကျဉ်းမှာ – “ကမ္ဘာအမြင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ ငြ်ိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာတွေရဲ့ အမြင်မှာ တပ်မတော်ဖခင်၊ လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အမြင်အရ သူဂုဏ်ရည်တွေကို ကြည့်ရင်...
>Local Burmese said Trial on Daw Suu totally unjust
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲခြင်းမှာ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ် – ပြည်တွင်းက လူထုအများစု တြုံ့ပန် ၀င်းမြတ် မေ ၁၆၊ ၂၀၀၉ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံသား ရေကူးသမားအား လက်ခံထားရှိတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ နအဖ အစိုးရက တရားစွဲဆိုရန် ပြုလုပ်နေတာကို ပြည်သူ လူထုထံက မကျေမနပ် တုံ့ပြန်သံများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်စုကို ပြန်လည် လွှတ်ပေးဖို့ ရက်ပိုင်း အလိုမှာ အခုလို လုပ်လိုက်ခြင်းဟာ နအဖ အစိုးရရဲ့ ဒေါ်စုအပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားကို ရှင်းပြစရာမလိုအောင် ဖော်ထုတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ပေါ်ပေါ် တင်တင် ဥပဒေမဲ့ ပြုလုပ်တာ...
> တီမောသမ္မတက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ကို နိုင်ငံတကာခုံရုံးသို့ ပိုရန် ဆန္ဒရှိဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၁၅၊ ၂၀၀၉ အရှေ့တီမောနိုင်ငံ သမ္မတ ဟိုဆေးရာမို့စ် ဟော်တာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးခြင်း မပြုလျှင် မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ် တရားရုံး (ICC) က စုံစမ်းအရေးယူရန် သူက တောင်းဆိုမည်ဟု ဂျကာတာရှိ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်ကို ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျဉ်းချထားခြင်းသည် အလွန်စက်ဆုပ် ရွံမုန်းစရာ၊ ခံပြင်းစရာ ကောင်းသည့် အပြုအမူ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောလိုက်သည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ ပြစ်ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုများ အပါအ၀င် ခိုင်မာတိကျသည့် အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်လာရန် စစ်အစိုးရက ဆွပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုလည်း မှတ်ချက် ချသွားသည်။ သမ္မတ ဟော်တာသည်...
>Dagon Tar Yar at 90 – His Words
> ၉၀ ပြည့် ဒဂုန်တာရာ ရဲ့ မွေးနေ့စကား – ကျနော်တို့တတွေအချင်းချင်းမှာ ရန်သူမရှိ မိတ်ဆွေသာရှိ၊ ညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်ကြ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးသို့ ဆောင်ရွက်ကြဟု ထပ်လောင်းပြော မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၅ မေ ၁၅၊ ၂၀၀၉ (အသက် ၉၀ ပြည့် ဒဂုန်တာရာရဲ့ မွေးနေ့စကား ရုပ်သံကို ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်) ၂၀၀၉ မေ ၉ မှာ အသက် ၉၀ ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ ဒဂုန်တာရာရဲ့ မွေးနေ့ကို ၎င်းရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားသော မိတ်ဆွေများ၊ ရဲဘော်များနဲ့ စာပေ၊ အနုပညာနဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က မိသားစုများက ၀ိုင်းဝန်းကျင်းပခဲ့ကြရာမှာ ဆရာက ၎င်းရဲ့ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ရန်သူမရှိ၊...
> မြန်မာသံရုံးများအနီးတွင် မြန်မာပြည်သားတို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၁၅၊ ၂၀၀၉ မလေးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့ ယနေ့မြင်ကွင်းများ။(ဓာတ်ပုံ-getty images)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးသမားများကို ထောင်မှလွှတ်ရန် ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သားများက မြန်မာသံရုံးများအနီးသို့ သွားရောက်ပြီး ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်။ဂျပန်မှ မြန်မာသံရုံးရှေ့ရှိ ယမန်နေ့က မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ-AP) ယမန်နေ့က တောင်ကိုရီးယားရောက် မြန်မာပြည်သမားများ မြန်မာသံရုံးရှိရာသို့ သွားပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြသည်။ (ဓာတ်ပုံ-getty images) No tags for this post. Related posts No related posts.
>BLC criticizes SPDC
> ဒေါ်စုအား ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာ နည်းလမ်းမကျဟု ဥပဒေအဖွဲ့ ထောက်ပြမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၄မေ ၁၅၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်ရှိနေသည့် အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ ယနေ့မြင်ကွင်း (photo: getty images) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားရုံးတင် စစ်ဆေးနေခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မှု မရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများ ကောင်စီ (Burma Lawyer Council – BLC) က ယနေ့ ထောက်ပြ ပြောဆိုလိုက်သည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ဒေါ်စုကို “နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ” ဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက “တရားရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းစရာ မလိုဘဲ” မည်သူ့ကိုမဆို ထိုဥပဒေဖြင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်ဟု...
>Oveseas Burmese to Protests to Free Daw Aung San Suu Kyi
> ပြည်ပရောက် မြန်မာတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြန်မာသံရုံးများရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုကြပြီ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ မေ ၁၅၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့များက ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်ရှိ မြန်မာများ အသီးသီး စုဝေးကြပြီး မြန်မာပြည်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် စစ်အစိုးရ၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး တရား စီရင်ခြင်း ခံနေရသူ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရေးနှင့် ဥပဒေမဲ့ မတရား အကြမ်းဖက် ဆောင်ရွက်နေသူ နအဖ စစ်အုပ်စုအား ကန့်ကွက် ရှုတ်ချ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခြင်းများကို မြန်မာ သံရုံးများ ရှေ့တွင် ပြုလုပ်ကြသည်။ အလားတူ ကနေဒါနှင့် အမေရိကန် အရှေ့ခြမ်း နယူးယောက် နှင့် ၀ါရှင်တန်ရှိ...
>Cartoon Saw Ngo – The Next Victims
> ကာတွန်းစောငို – သူပြီးရင် နင့်အလှည့်မေ ၁၅၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>NLD party strongly condemn the Burmese military
> အင်န်အယ်ဒီပါတီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အရေး စစ်အစိုးရအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄ မေ ၁၅၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၎င်း အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံထားရသည့် နေအိမ်မှ အင်းစိန်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး နိုင်ငံတော်အား အန္တရာယ် ပေးသူ တဦး အဖြစ် စွပ်စွဲ၍ တရားစီရင်ရန် ကြိုးစားနေသည့် စစ်အစိုးရ လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း ၎င်း၏ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီက ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်ရေး နှင့် နိုင်ငံရေး အပေးအယူ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ အတွက် အစဉ်တစိုက် စွမ်းဆောင်နိုင်သူ၊...
>More Restriction & Pressure to Political Prisoners in Burma
> မြန်မာပြည်တွင်းရှိ အကျဉ်းထောင်များ အတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ပိုမို တင်းကြပ် မြစ်ကြီးနားထောင်က ဖောက်ထွင်း ၀ိဇ္ဇာတဦး ထောင်ဖောက်ပြေး မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၅ မေ ၁၅၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထောင်သို့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မိသားစုဝင်များကို ပြောင်းရွှေ့ ချုပ်နှောင်ထားပြီး နောက်ပိုင်း ရပ်နီး ရပ်ဝေးရှိ အကျဉ်းထောင် အသီးသီး၏ လုံခြုံရေးကို အထူး တင်းကြပ်လိုက်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ သတင်း ရပ်ကွက်က ပြောကြားသည်။ “ယခင်ကတည်းက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို သာမန် ပြစ်ဒဏ်ကျတွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေ၊ ဆက်သွယ်မှုတွေ မပြုလုပ်နိုင်အောင် တားမြစ်တယ်။ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြပ်တည်း ဆင်းရဲအောင် လုပ်ထားတယ်။ ထောင်ဝင်စာ တွေ့မယ့်...
>Daw Suu doesn’t want Yattaw gets arrested
> “သူ့ကြောင့်မို့ လူတယောက် – – – အဖမ်းခံရတာ မလိုလားဘူး”ဘီဘီစီ အင်တာဗျူးမေ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်စု၏နေအိမ်သို့ ၀င်ရောက်မှုဖြင့် အဖမ်းခံထားရသူ ဂျွန်ဝီလျံယက်တောကို အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန် ယမန်နေ့က သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ် အာဏာပိုင်တို့ ၀ိုင်းဝန်း လေ့လာနေပုံ။ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းသည် ယမန်နေ့ကရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်လည်း အင်းစိန်ထောင်အတွင်းရှိ တရားရုံးတွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်တို့ ယနေ့ စွဲဆိုလိုက်သည့် အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း တိုင်ပင် ပြောဆိုကြသည်ဟု သိရသည်။ တရားစွဲတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာတွေ ပြောပါသလဲ။ဒေါ်စုက အဲဒီ (နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသူ ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေ) ပုဒ်မ ၂၂...
> ဒေါ်စုကို စွဲဆိုသည့်အမှု ထောင် ၅ နှစ်အထိ ချနိုင်AFP သတင်းဌာနမေ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စိတ်ဓာတ် အလွန် ခိုင်မာနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရပြီး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည့် အမှု ဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေတဦးက ပြောသည်။ ရှေ့နေ ဦးလှမျိုးမြင့်က သတင်းထောက်များအား ပြောရာတွင် ဒေါ်စု၏ အမှုကို လာမည့် တနင်္လာနေ့သို့ ရုံးချိန်းပေးလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေါ်စုသည် သူ၏အိမ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၀င်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့် တရားစွဲခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ အမေရိကန်သည်လည်း တားမြစ်နယ်မြေသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းအပြင်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေတို့ဖြင့်...
>Cartoon Maung Yit – Burma’s Next Strategic Move – Let’s go for 2010 Election !!! ( To Free Burma and To Free Aung San Suu Kyi)
> Cartoon Maung Yit – Burma’s Next Strategic Move – Let’s go for 2010 Election !!! ( To Free Burma and To Free Aung San Suu Kyi) May 14, 2009 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Daw Suu to be tried
> ဒေါ်စုကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်AFP သတင်းဌာနမေ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်စုကို တင်ဆောင်လာသော ယာဉ်တန်း အင်းစိန်ထောင်အနီးသို့ ရောက်ရှိလာစဉ် (photo: getty images) အာဏာပိုင်တို့က ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အကျဉ်းထောင်သို့ ခေါ်သွားကြောင်း၊ သူ၏ နေအိမ်အတွင်းသို့ ခိုးဝင်မှုဖြင့် တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒေါ်စု နှင့် အတူနေထိုင်ကူနေသော အမျိုးသမီး ၂ ဦး တို့ကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်မည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ အရာရှိ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ မည်သည့် စွဲချက်များ တင်မည်ကို မသိရသေးဟု ဆိုသည်။ ဒေါ်စုသည် အထိန်းသိမ်းခံနေရသည်မှာ ၆ နှစ်ပြည့်ရန်...
>data of John William Yettaw
> John William Yettaw အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်နှင့် တွေ့ခွင့်ရဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၁၄၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အတွင်းသို့ လျှို့ဝှက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား John William Yettaw ကို ယမန်နေ့က သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပုံ။ ယနေ့ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည့် သူ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။၁။ အမည် – John William Yettaw၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ၃။ အသက်/မွေးသက္ကရာဇ် – (၅၄)နှစ်၊ ၆-၉-၁၉၅၅၄။ လူမျိုး – အမေရိကန်လူမျိုး၅။ အရပ်အမြင့် – ၅ပေ၊ ၁ဝလက်မ၆။ ကိုယ်အလေးချိန် – ၂၂ဝပေါင်၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ – Detroit Michigan၈။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် –...
>Daw Aung San Suu Kyi to be sent to court in Insein Prison
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်ထောင်တရားရုံးသို့ ခေါ်ထုတ်ပြီး စစ်ဆေးမည်ဟု သတင်းထွက် ဒေါ်စုကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန် နိုင်ငံတကာမိသားစုများက တောင်းဆို မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄ မေ ၁၃၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်အချိန် ကြာသာပတေးနံနက်တွင် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသူ အင်န်အယ်ဒီပါတီ၏ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တအိမ်တည်းအတူနေထိုင်သူ အမျိုးသမီး ၂ ဦးကို အင်းစိန်ထောင်ရှိ တရားရုံးသို့ ခေါ်ထုတ် စစ်ဆေးမည်ဟု ပြင်ဆင်နေကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ သတင်းရပ်ကွက်တခုက ဆိုလိုက်သည်။ မေလ ၆ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ အင်းယားကန်ကို ဖြတ်ကူးပြီး ၀င်ရောက်ခဲ့သဖြင့် စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်းစိန်ထောင်တရားရုံးသို့ ဆင့်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု...
> ရင်ကွဲနာခွန်ပန်းစိန်မေ ၁၃၊ ၂၀၀၉ ဒီတခေါက်သူ မြို့လေးဆီပြန်ရောက်လာခြင်းသည် ၁၂ နှစ် အကြာတွင်ဖြစ်လေသည်။ သူသည် ဒီမြို့သားဖြစ်၏။ ဒီမြို့ကိုချစ်သည်။သူ့ ဖေဖေရော မေမေပါ ဒီမြို့မှာ ခေါင်းချခဲ့သည်။ ရုံတော်ကြီး ဟိုတယ်လေ သိတယ် မဟုတ်လား။ မြို့လယ် လမ်းမကြီးမှာလေ။ သူအိမ်နှင့် ကပ်ရက်မှာ ဒိုင်အိုကျောင်းက အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာကြီး ဦးဝေဠု နေသည်။ သူ့ငယ်ဆရာကြီး။ ဆရာကြီးက အင်္ဂလိပ်စာ အပြင် ဘုရားရှစ်ခိုးပါ သင်ပေးသည်။ သို့သော် ဆရာကြီး သောက်ဖို့ အရက်ကိုတော့ ညနေတိုင်ကျရင် ဆရာကြီး၏မြေး ကိုမျိုးသန့်နှင့် အတူ သူက ရုံတော်ကြီး ဟိုတယ်မှာ တပိုင်းတပိုင်း သွားသွား ဝယ်ပေးရသည်။ ဘဲကင်လေး၊ အသားကင်လေး၊ အခေါက်ကင်လေး ပါသည်။ (အပြည့်အစုံသို့)...
>stamps for 150th anniversary of Mandalay city
> နှစ် ၁၅၀ ပြည့် မန္တလေး (တံဆိပ်ခေါင်းများ)ဦးအုန်းကျော် မေ ၁၃၊ ၂၀၀၉ ̏ဟ ဒီလတော့ ငါ့တူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ တယ်အဖွဲ့တောင့်ပါလားဟေ့။ လာကြ လာကြ˝ “သင်္ကြန်အပြီးဆိုတော့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဦးလေးကို ကန်တော့ရအောင် တမင်တကာ လူစုပြီး လာခဲ့ကြတာပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့လ တုန်းက ဦးလေးက မန္တလေးမြို့ နှစ် ၁၅၀ ပြည့်တဲ့အကြောင်း စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြမယ်ဆို။ မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုကြမယ်ဆို။ အဲဒါကြောင့် အခုလို ရသလောက် လူစုခဲ့တာပဲ။ ဦးလေး ငှားလိုက်တဲ့ ဆရာတော် ဦးသောဘိတ (ရွှေကိုင်းသား)ရဲ့ အနှစ် ၁၀၀ ပြည့် မန္တလေး စာအုပ်ကိုလည်း ကျနော်တို့ ဖတ်ပြီးကြပါပြီ။ သမိုင်း ရှုထောင့်ကနေ...
> အဖမ်းခံထားရသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား သံရုံးနှင့် တွေ့ပြီAP သတင်းဌာနမေ ၁၃၊ ၂၀၀၉ မြန်မာအာဏာပိုင်တို့က အမေရိကန် သံတမန်တဦးကို ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အင်းလျားကန်တွင် အဖမ်းခံရသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသားထံ သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း ယနေ့ညနေ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းတွင် ကြေညာသည်။ အဖမ်းခံထားရသူသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ ရေကူး၍ သွားရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံသတင်းတွင် John William Yettaw နှင့် ကောင်စစ်ဝန် Colin Furst တို့ တွေ့ဆုံစဉ် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံကို ပြသသွားသည်။ အမေရိကန် သံတမန်တဦးက ထိုသို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုသည်။ နာရီဝက်ကြာ တွေ့ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အဖမ်းခံထားရသူသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဟန်ရှိသည်။ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံခံရကြောင်း ပြောပြသည်ဟု ဆိုသည်။...
> ညီမလေးဖတ်ဖို့စာစောငိုမေ ၁၃၊ ၂၀၀၉ * ညီမလေးရေမြကန်သာမှာကြာမျိုးစုံပွင့်သတဲ့။ * ညီမလေးရဲ့ဘဝရဂုံသာကားမြပုဏ္ဏမာ ငွေလဝန်းထွန်းတဲ့စမ်းရေအိုင်။ * လမသာ ရေမစီးလွင်တီးကုန်း ကန္တာမြေနတ်တို့ပင် ဖွေသော်လည်းရွှေကြာတို့ မပေါက်ရောက်ရာ။ * တောကြီးမာယာမဟာဂနိုင်ကားသူယောင်တို့ ပြုစားရာ။ * မြို့ကြီးမာယာဝင်္ကန္တာကားအသူတရာတည့်။ * မိစ္ဆာစိုးမိုးခိုးသူတို့နေရာအမိမြန်မာကားကာလဒုက္ခတည့်။ * ညီမလေးရေကသစ်ပန်းဆိုတာနတ်တို့ရဲ့စခန်းမှာသာပွင့်လန်းရမြဲ ဓမ္မတာပါ။ * သူပုန်မည်သည်ရဂုံပြည်မှာ တင့်တယ်သလိုအနုပညာသည်ရဲ့အလှဘဝ သဏ္ဍာန် သမုဒယသုခုမ လမ်းမှာသာအစွမ်းတန်ခိုး ပီဘိအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အဖြစ်ထုဆစ် သည်ပိုးရသည်ကော။ * ငါကားအနုပညာကို မြတ်နိုးအနုပညာ အမျိုးနွယ်ကိုအနုပညာ နယ်ပယ်မှာသာတင့်တယ်စေလိုသူတည်း။ * ညီမလေးရေပရိယေသန သက်သက်မဟုတ်ပါတရားပျက်အမှားဖက်အမိုက်တွင်းနက်ယွင်းပျက်တဲ့ ခေတ်ကာလဖြစ်လာရတဲ့ လူ့တဘဝသုခုမ ပညာသည်ခရီးမီးအိမ်လေးတလုံး။ * အမိုက်ကိုတိုက်ခိုက် အံတုမှုသည်ပင်အကြင်အဖိုးဖြတ်မရသည့်ဘဝ၏ အနှစ်သာရပေပ။ * တိုက်ပွဲထဲမှာအမိုက်ကို ရဲရဲအာခံမြန်မာပြည် တော်လှန်ရေးသွေးတွေစီးဆင်းဆဲအကျဉ်းနရသိန်လည်းသူရဲကောင်းတို့အိမ်ဖြစ်ဆဲဘဝကို စွန့်မြဲစွန့်ခဲ့ရကျဆုံးသွားသူအပေါင်းအထောင်အသောင်းလည်းမောင်းမောင်းချီတက်ကြဆဲကို။ *...
>NLD party urged the Junta ; Daw Suu has rights to get medical treatment
> အင်န်အယ်ဒီပါတီက ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လပ်စွာ ဆေးကုသခွင့်ရှိသင့်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄ မေ ၁၃၊ ၂၀၀၉ မေလ ၁၂ ရက်စွဲဖြင့် အင်န်အယ်ဒီ ပါတီဌာနချုပ် ကြေငြာချက်အမှတ် ၇၊ ၅၊ ၉ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ရာတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံထားရသူ ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင် ကျန်းမာရေးအတွက် လွတ်လပ်စွာ ဆေးကုသခွင့်ရှိကြောင်း၊ စစ်အစိုးရ၏ အကျယ်ချုပ် တားမြစ်မှု၏ သတ်မှတ်ချက်တွင် သံရုံးများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ဆက်သွယ်မှု မပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြင်ပသို့ သွားရောက်ခြင်း၊ အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်သာ တားမြစ်ထားကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသခွင့်ကို တားမြစ်ထားခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီး မေလ ၁၁ ရက် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်များ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်...
>Burmese in Colorado received Free Medical Check Up
> ကော်လိုရာဒိုရောက် မြန်မာများ အခမဲ့ ကျန်းမာရေး ဆေးစစ်မှုပြုလုပ် ကိုဦး မေလ ၁၃၊ ၂၀၀၉ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအသင်း (Burmese Community of Colorado) နှင့် (Colorado Asian Health Education and Promotion) တို့ ပူးပေါင်း၍ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးဆေးစစ်မှုကို ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အော်ရိုရာမြို့ရှိ ဓမ္မပါလ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် မေလ ၁၀ ရက်နေ့ မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ နေ့လည် ၂း၃၀ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ပွဲတွင် ဆီးချို သွေးချိုရောဂါ၊ အဆီဓာတ်လွန်ကဲမှုရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ဓာတ်မသင့်သည့် ရောဂါ၊ အမျိုးသမီး ရင်သားကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်...
>Child Aid Foundation to establish Charity School for the Needy Children
> နာဂစ်အလွန် တနှစ်ပြည့် မေတ္တာနန္ဒပရဟိတကျောင်းအဖြစ် တိုးချဲ့ရန် နာဂစ်သင့် မိဘမဲ့ကလေးများ ကူညီရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ပြင်ဆင် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ မေ ၁၃၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြို့အနီး မြေ ၄ ဧကပေါ်တွင် မေတ္တာနန္ဒ ပရဟိတကျောင်းတကျောင်းကို မန္တလေး ဖောင်တော်ဦး ပရဟိတကျောင်းက ဆရာတော်များ၏ ၀ိုင်းဝန်းကူညီမှုဖြင့် ထူထောင်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ငါးကျမ်းပြန်သာသနာ့ရိပ်သာက ဆရာတော်များ၊ တကာ၊ တကာမ မိသားစုများက ကမကထပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ကုသိုလ်ရှင်များ၊ စေတနာရှင်များ၏ စုပေါင်း အလှူဒါနဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သော Child Aid Foundation (Myanmar) အမည်ရှိ နာဂစ်သင့်မိဘမဲ့ ကလေးများကူညီရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည် နာဂစ်မုန်တိုင်းအလွန် တနှစ်ပြည့်ချိန်တွင် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ ပိုမိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်...
>2 journalism trainers deported to Bangkok
> မြန်မာပြည်မှ နှင်ထုတ်ခံရသူ စာနယ်ဇင်း သင်တန်းဆရာ နှင့် ဆရာမဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၁၂၊ ၂၀၀၉ မကြာသေးမီက မြန်မာအစိုးရက နှင်ထုတ်လိုက်သည့် စာနယ်ဇင်း သင်တန်းဆရာ နှစ်ဦး ဖြစ်သော ဂျယ်ရီရက်ဖန်း နှင့် ကာရင်ကုတ်စ် (ဓာတ်ပုံ – redcoates.net ) (ဘန်ကောက်တွင် သူတို့နှစ်ဦးက အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်သည့် စာကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့နိုင်သည်။) မိမိတို့၂ဦး မေလ ၆ ရက်နေ့က မန္တလေးတွင် ထိန်းသိမ်းခံရသည်။ နောက်တနေ့တွင် ဘန်ကောက်သို့ နှင်ထုတ်ခံရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် စင်တာ (American Center)က စီစဉ်သည့် ဆောင်းပါး အရေးအသား နှင့် ဓာတ်ပုံပညာရပ် ဆိုင်ရာ သင်တန်းများအပြီးတွင် ဖမ်းဆီးခံရသည်။ သင်တန်းများမှာ စိစစ်ရေးဌာနထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရပြီးဖြစ်သည်။...
>Col. Kaung Myat died inabattle
> ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြောင့် စကခ(၅)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကောင်းမြတ် ကျဆုံးနန်းထူးစံ၊ ကရင်သတင်းစဉ်မေ ၁၂၊ ၂၀၀၉ ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ဘက် မိုင်(၃ဝ)ခန့် ကွာဝေးသော သံတောင်မြို့နယ်၊ ဘောဂလိကျေးရွာအုပ်စုတွင် စခန်းထိုင်သည့် အမှတ်(၅) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် (စကခ) မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကောင်းမြတ်သည် မေလ (၁၁)ရက်နေ့က ကရင် အမျိုးအသား အစည်းအရုံး KNU နှင့် ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားသည်ဟု KNU တောင်ငူခရိုင်မှ လာသည့်သတင်းအရ သိရသည်။ ထိုနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကောင်းမြတ်သည် ၎င်းဦးစီးသည့် နည်းဗျူဟာ (၃) တပ်ရင်း နှင့်အတူ ဘောဂလိကြီးမှနေ၍ ဘူဆာခီး၊ နောဆိုးရှိ လက်နက်ကြီး စခန်းများသို့ သွားရာ လမ်း၌ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ(၂)ဌာနချုပ်၏ လက်အောက်ခံ...
Page 812 of 896«1...810811812813814...896»
Kyaw Thu - Essay
>Ko Ko Aung (San Francisco), Remembering Tin Moe after2year
>Mar Mar Aye - 380
ပီမိုးနင်း နှင့် ကျော်သက် ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်နိုင်ကြမလဲ
>Burmese in LA marked 88 - 21 Years Event
>Cartoon Beruma - Water Charity